Akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara ihe gbasara Federal Ozi si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags Njikwa ihe gbasara Federal
Njikwa ihe gbasara Federal
Senate, SGF kpọmkwem PTAD iji nwetaghachi ndị nduzi kpochapụrụ
Senate na Office nke odeakwụkwọ nke Gọọmenti Federation (OSGF), ha enyela ntụziaka maka Ụlọ Ọrụ Nhazi Mgbasa Ozi (PTAD) iji weghachite ndị nduzi ise nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ndị a chụpụrụ n'afọ gara aga.
Onye isi bu Buhari mebiri iwu ndi gomenti - Ex-President Obasanjo
Onye isi oche bụ Olusegun Obasanjo ebubola onye isi oche bụ Muhammadu Buhari maka imebi iwu nke gọọmenti etiti na nhọpụta nke isi ụlọ ọrụ nche.
Ex-President Obasanjo kwuputara nkwupụta na Coalition maka Nigeria
Otú ọ dị, ege ntị ma ọ bụ na ọ bụghị, ekwenyesiri m ike na Nigeria apụghị ịnọgide na-azụ ahịa dị ka ọ dị na mbụ. N'ihi ya, m nyere ụzọ ma ọ bụ ụzọ ga-esi aga n'ihu.
Ndị isi oche nke ndị isi obodo na-ajụ ụlọ ahịa ehi
Ndị Lagos Elders Council ajụla ndị ọchịchị nke anụ ụlọ nke Gọọmentị Federal chọrọ, na-akọwa echiche ahụ dị ka bọmbụ oge.
Ndị na-ahụ maka ndị obodo na-edozi onwe ha dị ka ndị isi oriri na-eri nri na-akwụ ụgwọ
Òtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Obodo na Naijiria, bụ onye mmekọ nke Trade Union Congress, chebela atụmatụ ya na-eme mgbe ọ malitere ịkwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ ọnwa Tuesday na Federal Government.
Ndị ọrụ obodo kwụsịrị ịkwado mba niile
N'okpuru izu nke izu otu n'ime ya ka o kwesiri idozi ego nile nke ndi oru gọọmenti etiti ma ọ bụ ihe ize ndụ nke ndi mmadu abia ato n'uwa dum, Gomenti Gomenti na Tuesday malitere ịkwụ ugwo na onodu nke ndi oru obodo.
Ndị agha Niger Delta na-arịọ gọọmentị na-enye nri maka ịhapụ ikikere maka 10 modular refineries
Ndi nnochite anya Niger Delta Avengers, RNDA, na ndi ozo di iche iche ndi ozo di iche iche agwawo Gọọmenti Gọọmenti ka ha nye akwụkwọ ikikere 10 gaa na Obodo Nleta nke Nigeria, HOSTCOM, maka iwepụ ihe ntinye aka na Niger Delta.
Gov. Ahmed kwadoro dị ka ndị nkatọ na-ede ya ala
Gomina Gwara nke Kwara, Abdulfatah Ahmed, emetụla ndị nkụzi ahụ ala, ndị na-ekwu na gọvanọ emeghị ka ndụ ndị mmadụ nwee mmetụta.